Eo Amintsika Ny Fiteny: Andiany Fahatelo Amin’ny “Müpüley Tain Mapudungun” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2016 18:52 GMT
Amin'ny fizarana fahatelo amin'ny tetikasa “Müpüley Tain Mapudungun” (Misavoana ny Mapudungun Anay), mandinika ny amin'ny fiteny ny mpandray anjara.
Nandeha teny an'araben'i Buenos Aires ry zareo hamantatra ny fahafantaran'ny mponina ny fiteny Mapudungun ao an-tanàna. Nahagaga kokoa ireo nanontaniana noho ireo niantsafa ny valiny: hita na aiza na aiza na amin'ny anaran'olona manokana, anaran-dalana, anaran-tanàna ny fiteny Mapudungun, eny fa na dia amin'ny tanana heverina ho Eoropeana aza. Talanjona amin'ny hakanton'ny fiteny ihany koa ry zareo, satria manana voambolana mifandrohy akaiky amin'ny zavatra hita maso na tsia amin'ny lazainy ilay fiteny tranainy; ary mifandray akaiky amin'ny feo niavian'ilay fiteny, toy ny ‘treftrefi’ (feon'ny fihazakazaky ny fidobodoboky ny fo). Indreto no tanjon'ity fanadihadiana fahatelo sady farany : Haneho ny hakanton'ny feon'ny fiteny Mapuche ary hanaporofo fa mijoro tsy araka izay sainintsika ny fiteny.
Ny tontolon-teny ao an-tanànan'i Buenos Aires dia ahitana fiteny espaniola avy ao Buenos Aires, ny fiteny anglisy any an-tsena anoloan'ny varavarankely sy ireo zavatra ao anatin'ny fiainana andrenivohitra federaly. Raha atao topimaso voalohany, dia tahaka ny ao anatin'ny kolontsaina tokana manerantany isika. Saingy, mazava amin'ny rehetra te-hijery fa voahodidina kolontsaina sy fiteny hafa, tahaka ny fiteny Mapudungun isika. Eny fa na dia tsy mahafantatra azy aza.
Amin'ity fanadihadiana fahatelo sady farany ity, miara-mandinika ny fiteny miaraka amin'ireo hafa mihevitra ho tsy mahalala na inona na inona amin'ny fiteny Mapudungun ny mpandray anjaran'ny atrikasa. Mivoaka ho eny an-dalambe ny mpandray anjara sasany manana fahalalana kokoa ilay fiteny hijery hoe tahaka ny ahoana ny fisian'ilay fiteny amin'ireo miaina ny fiainana andavanandron'ny tanàna. Nahagaga kokoa ireo nanontaniana noho ireo niantsafa ny valiny: hita na aiza na aiza na amin'ny anaran'olona manokana, anaran-dalana, anaran-tanàna ny fiteny Mapudungun. Tampoka teo, tsapanay fa mijoro sy ampiasaina any amin'ny sehatra maro ity fiteny ity na dia tsy fantatra aza ny anarany: ‘ny fitenin'ny tany’.
Ny fiteny maty dia fiteny tsy mandeha, tsy mihavao, tsy ampiasaina intsony; fiteny tsy manana intsony ny dikan'ny feo. Mifanohitra amin'izany kosa, miaina miaraka amintsika ao amin'ny ‘longko’ [loha] -n'ny mpiteny maro tsy nanaiky nampangina ny tenany ny fiteny Mapudungun, Mapuche na tsi-Mapuche monina amin'ny fiainana an-tanandehibe. Tsy fantantsika rehetra fa isika monina an-tanandehibe no mampivoy ny fiteny Mapudungun, amin'ny voambolana izay ao anatin'ny kabarintsika tsy mahalala akory izay niaviany. Avy amin'izany dia ilaina ny miasa amin'ny fiteny, indrindra ao anaty toe-javatra izay tsy ahazoany vahana amin'ny fahavelomany, amin'izay izy mitsahatra tsy ho mpandray anjara tsy hita maso ao an-tanàna.
Ao amin'ny teboka iray amin'ny fanadihadiana, mianatra miarahaba tahaka ny ao anaty kilalao ny ankizy. Miampita zaratany ara-kolontsaina vaovao ry zareo rehefa mitondra tontolon-dikan-javatra sy atao fakantahaka ny fiteny tsirairay avy. Ao amin'ny fiteny Mapudungun, misy ny voanteny mifandrohy akaiky amin'ny zavatra hita maso na tsia amin'ny zavatra lazainy ilay fiteny; amin'ireo feo nahaterahany, tahaka ny ‘treftrefi’ (feon'ny fihazakazaky dobodobom-po), ny ‘wütaw-wütaw’ avy amin'ny ‘piwke’ (dobodoboky ny fo), ny ‘chucaw’ (anarana avy amin'ny fihiran'ny vorona chucao) ao anatin'ireo hafa izay ahafahana mahita ny anatin'ny tontolon'ny kolontsaina Mapuche. Indreto no tanjon'ity fanadihadiana fahatelo sady farany : Haneho ny hakanton'ny feon'ny fiteny Mapuche ary hanaporofo fa mijoro tsy araka izay sainintsika ny fiteny..
Henoy ihany koa ny :